Hargeysa: Muwaadin Isku Xilqaamay Quudinta Dadka Dhimirka Ka Xanuunsanaya Xilliga Ramadaanta - Jigjiga Online
HomeSomalidaHargeysa: Muwaadin Isku Xilqaamay Quudinta Dadka Dhimirka Ka Xanuunsanaya Xilliga Ramadaanta
Hargeysa: Muwaadin Isku Xilqaamay Quudinta Dadka Dhimirka Ka Xanuunsanaya Xilliga Ramadaanta
”Runtii imika toban sanadood waan waday hawshan. Runtii jeebkaygaan ku bilaabaa, cid iga caawisa, xukuumad iga caawisa taajir iga caawiyaa ma jiro. Mar waan dhamaystiraa, mar dayn baan u galaaba. Marna ummadaan u weydiiyaa oon idhaa waar yaa wax siinayaay, waar yaa wax ku darsanaya khayrkaay, waar waa bishii Ramadaan waar yaa ila caawinaya ummadan?” ayuu yidhi Maxamed-jagac oo la weydiiyey sida uu u maareeyo kharashka ku baxa quudinta dadka masaakiinta ah ee uu wax siiyo.
Maadaama oo ay iyada qudheedu da’ tahay, waxna aanay ganacta ku hayn una shaqayn karayn si ay u quudiso inamadeeda, ayaa isaga oo sawiraya duruufta ay hooyadaasi ku jirto waxa uu yidhi “laba inan oo waalwaalan ayay haystaa, waana da’ iyadu oo iyadiibaa ba tukube sidata. Ilmaa kaa imanaysa, waxay tidhi hooyo anoo da’ daas ah ayaan labadaydii curad daba socdaa. Cid ii gargaarta iyo cid iga caawisana ma hayo”
Maadama oo uu yahay dedaal shakhsi keli ahi wado, inta uu gaadhi karaa way koobantahay, waxaana uu xoogga saaraa bal in bisha Ramadaan inta lagu jiro aanay maalintii dadkaasi gaajo u le’an maadaama oo aan soon ku waajibin.